Iingcebiso zengcinezelo zomoya zeTire neTricks
Iimoto neekhekhi Tires & Wheels
Uxinzelelo lwemoya yinto yokuphila kwanoma yiyiphi itayiti, kunye nokuba yinto ephela ngedata ukuba umqhubi angatshintsha ngokwenene! Kukho, nangona kunjalo zimbalwa iingcamango eziphosakeleyo kunye nolwazi oluchanekileyo apha malunga nokuxinzezeleka komda, kunye nabaqhubi abancinci kakhulu, (mna ndibandakanya) bahlawule ingqalelo kwiingcinezelo zabo zentswelo njengoko kufuneka. Nantsi i-scoop eqondileyo.
Yazi lwakho uxinzelelo
Uninzi lwamathaya uya kuba nenombolo ye "Max.
Inkcazo yeCold. "Embossed on their sidewalls. Ungayisebenzisi le ngcinezelo kumathayi akho! Uxinzelelo olufanelekileyo lwangaphakathi luya kuba sepaliti engaphakathi kwendlu yangaphambili yomqhubi. Lo ngumxinyilo ocebisa umenzi weemoto, ngokusekelwe kwisisindo semoto kunye nobukhulu besondo.
Abaqhubi abaninzi bathanda ukunyanzelisa iingcinezelo zabo ezincinci, ukulungisa ukuhamba ngokugqithiseleyo okanye ukuhamba. Andiyithandi, kodwa ukuba uyenjenjalo, ndincoma ukuba ndiyenze kuphela kwimida eqinile. Andiyi kuhlengahlengisa kakhulu ngaphezu kwamakhilogremu ambalwa ngapha nangapha kwinqanaba lokuqala lomenzi. Uninzi lweemoto zinezibane ezixinzelelekileyo zelanga ezikhanyisa ukuba iingcinezelo zingaphandle kwe-25% yesiseko - ukuba ubona oko, uyancipha kakhulu.
Abanye bathi ukunyanyisa iithayi kunokunceda ukukhusela iivili ngeempembelelo. Oku akuyinyaniso, enyanisweni, uxinzelelo oluninzi lunokuba lubi okanye lubi ngaphezu kokuncinci. Iinqwelo zamatye ziya kudlulisela amandla amaninzi ukusuka kwimpembelelo kumavili ngaphandle kwamathayi angancinci.
Ukuba uqhubisana neengcinezelo, jonga amathayi akho ngokucophelela ngeempawu zengubo engavumelekanga. "Ukupheka", okanye ukugqithisa kakhulu phakathi kwinqanaba lokunyathela, luphawu lokunyanyisa. Ukugqithisa kakhulu kumagxa evili kuyisigxina soxinzelelo oluncinane.
Uxinzelelo lwomoya luyahlukahluka ngokushisa
Ukuze ufunde ngokuqhubekayo rhoqo uhlole iingcinezelo zakho phambi kokuqhuba xa amathayi afudumele.
Ukuba kufuneka udibanise umoya kumathayi atshisayo, shiya iipounds okanye ezimbini ngaphantsi kwexesha eliqhelekileyo, kuxhomekeke kwindleko ebandayo yongeziweyo. Xa kubanda ukushisa kwezulu, qinisekisa ukujonga iingcinezelo zakho ezintshonkcenkcesha zentsasa - uxinzelelo lomoya lungahlahlela malunga ne-1 psi nganye kwi- 10 degree drop in the temperature. Ukudibanisa neerubha ekhunileyo, ukulahlekelwa kwexinzelelo ngamanye amaxesha kungabangela ukuba amathayi aphule ngokungafaniyo ukuvuza.
Uxinzelelo oluphantsi luya kubonakalisa umbane wakho
Ukugijima kwixinzelelo elingaphantsi kwidayari ixesha elide liyakwazi ukulimaza kancinci umgama wecala xa iqala ukuphinda. Umfana omncinane nje uya kuqala ukulimaza i-rubber, kodwa kwinqanaba elithile i-foldewall ixhamle ngokwaneleyo ukuba iimilo zangaphakathi zithinte, kwaye oku kuya kuqala ukuxubha ibhola ngaphakathi kweevili, ukushiya iintambo, kunye nezandla "Uthuli werabha" ngaphakathi kwidare. Ngelo xesha, itayiti iyachithwa. Ukuba imoto yakho iyimodeli ka-2007 okanye kamva, iya kuba ne- "low tire pressure" ukukhanya kwideshibhodi. Funda isimboli samazwe ngamazwe ngxinzelelo oluncinci lomthamo, kuba lukhangeleka ludidekile ukuba awuzange ulibone ngaphambili. Inqaku elipheleleyo le-TPMS kukukuxwayisa ngaphambi kokuba umonakalo uvele.
Ukugcinwa kwengcinezelo yomoya ngenye yeyona nto ibaluleke kakhulu yokugcinwa kwezinto kwimoto yakho.
Ukugcinwa komoya okufanelekileyo kuya kunika igesi engcono kangcono, gweba ukungaqhelekanga kunye nokwandisa ubomi beevili zakho ngamawaka eekhilomitha. Ukuba ayinxalenye yendlela yokugcina yesondlo - kunye nezigidi zabaqhubi, akusiyo - ufanele ukuzama ukwenza okungenani into yenyanga.
Trey Size Calculators
I-Nokian Hakkapeliitta R2 I-Snow Tire Review
Indlela yokufumana i-Hole okanye ukuvuza eTire yakho
I-alloy vs vs. Wheels: I-Beauty kunye nesilwanyana
Ukuhlaziywa kweNokian WRG3 I-Asymmetric
Indlela yokugcina i-Installer ekungcoliseni iivili zakho
Ukuhlaziywa kweBridgestone Blizzak DM-V1
Ipaddleboards: Iiplastiki okanye iFiberglass
EMC² Amandla okulinganisa
Ukuhlaziywa kweNcwadi ethi 'Ukuphishekela Ubumnandi' nguChris Gardner
Igrama yoLwimi lwesiFrentshi: Intetho engqalileyo neNgqalileyo
I-Etymology encinane: isiGrike kunye neLatto Roots -
Phezulu uBruce Hornsby kunye neengoma zeRange ze-80s
Yiyiphi iQumrhu elifanelekileyo kwiBallet Dancer?
I-Astronomy 101 - Amanani amakhulu
Top Don Henley Solo Iingoma zee-80s
IRinger's Solution Recipe
Umzila wakho oya kwii-Olimpiki zokuThumela iiBhayisikili
UkuSombulula Imisebenzi yokuKhumela okuPhumelayo: IiNethiwekhi zoLuntu